🥇 ▷ Waxay tijaabinayaan SSDs cusub si ay u ogaadaan inay runtii kacaan u tahay khibradda ciyaaraha ✅
Waxay tijaabinayaan SSDs cusub si ay u ogaadaan inay runtii kacaan u tahay khibradda ciyaaraha
Xakamaynta waqtiyada xamuulku waa mid ka mid ah faa iidooyinka waaweyn ee tusiyeyaasha dambe ay bixin doonaan, iyagoo adeegsanaya kan cusub Tiknoolajiyadda AMD RDNA taas oo lagu garto in si fiican looga faa’iidaysto faashadda qaybaha kala duwan, iyada oo la tixgelinayo kiiska kaydinta iyada oo la soo bandhigayo PCIe 4.0. Tani waxay u suurtagelineysa xarkaha inay aad uga badan yihiin kuwii hore heerka, PCIe 3.0, ilaa heer gaaro xawaaraha ka sareeya 8Gbps / s. Waxaa jiray hadalo badan oo ku saabsan faa iidada weyn ee ay ka mid tahay in tikniyoolajiyadani lagu daro qalabka loo yaqaan ‘consoles’, sidaa darteedna SSDs cusub ayaa la tijaabiyaa si loo arko haddii ay runtii macno u yeelan doonaan kacaano khibrad ciyaaraha ah.
PCGamerN waxay dooneysay inay sameyso imtixaan isbarbar dhiga tikniyoolajiyadii hore PCIe 3.0 oo leh Samsung EVO 970, the SSD ugu waxtarka badan ee suuqa, oo leh nooca Corsair Force MP600 Gen4 PCIe 4.0 M.2 SSD. Labadaba sariir bay ku dhegan yihiin, MSI MEG X570 ACE, kaas oo leh tikniyoolajigan ‘PCIe 4.0’, oo ay weheliso processor AMD Ryzen 7 3700X, awood u leh karti u helidda dhammaan xaddiga xaddiga la heli karo. Intaa waxaa dheer, a Nvidia RTX 2080 Ti iyo 16GB ee xusuusta G Skill Trident Z Royal memory ee 3,600MHz. Qalabkan, boodhka tayada leh ee jira ee tikniyoolajiyadan loo tijaabin doonaa ayaa la tijaabin doonaa, iyadoo la tijaabinayo dhowr ciyaarood oo lagu gartay shaashadaha dheer ee xiisaha badan.
Si loo tijaabiyo kuwa cusub ee loo yaqaan ‘SSDs’ si loo raadiyo natiijadaas oo noqon lahayd kacaan ku soo kordha khibradda ciyaaraha, ciyaaraha sida Qaddar 2, Anthem ama Aasaasiyad Diineed Odyssey. Natiijooyinka la helay runtii ma muujinayaan farqi weyn oo u dhexeeya adeegsiga labadan moodel. Faa’iidooyin yaryar marka loo eego waqtiga culeyska ugu weyn, halkaas oo laga helay, inta ugu badan khilaafaadka qiyaastii 1 seken Waa macquul in laga fikiro in ay jiraan wax aan soo kordhinayn, maxaa yeelay xogta ku saabsan hagaajinta xawaaraha kala iibsiga ayaa jira oo waa mid aad u weyn.
Xitaa, iyada oo loo tixraacayo cunsurrada shaashadda, oo ahayd qayb kale oo lagu tilmaamay in ay tahay horumar muuqda oo loogu talagalay mustaqbalka jihooyinka cusub, natiijooyin muhiim ah lama helin labadaba. Xaqiiqdu waxay tahay in marka la eego PC-ga, adeegsiga tikniyoolajiyadan loo yaqaan ‘SSD’ ee ciyaaraha khamaarka waa caado. Laakiin waa inaan tixgalinnaa taas, loogu talagalay isticmaaleyaasha console, isbeddelka u dhexeeya a Mechanical HDD ama Xbox One X hybrid, ka mid noqoshada tikniyoolajiyadani waxay noqon doontaa boodbood muhiim ah.
Hadda, waxaa jiray hadal ku saabsan xakamaynta waqtiyada isku dheelitirka ee cayaaraha, wax u muuqda cod aad u fiican laakiin taasi iska cad uma muuqato run. Waxaan aragnaa sida loo dhejiyo ciyaarta wali wuxuu sugayaa jawi daqiiqad ah kulamada qaar iyo ka dhaqaaqida menu ilaa ciyaarta sidoo kale waxay xambaarsantahay caqli galkeeda. Tan iyo caruurnimadayda waxaan tuuray gellinka dambe oo dhan anigoo sugaya ciyaarta inuu ciyaaro, maadaama qaabka loo isticmaalay uu ahaa cajalad kujira MSX, kahadalka waqtiga sugitaanka dheer waa fikir kale aniga.
Maxay yihiin waxyaabaha saameyn ku leh waqtiyada cayaaraha ee cayaaraha?
Wax kasta oo ay kaga doodeen horumarka ku saabsan adeegsiga tikniyoolajiyadani waxay leeyihiin caqli badan waxayna ku taageerayaan xogta. Laakiin shaqada horumariyayaashu waxay u muuqdaan inay sidoo kale muhiim yihiin. Waana in akhrinta xogta kombiyuutarka adag ay tahay mid ka mid ah tillaabooyinka badan ee loo baahan yahay in la qaado si muuqaal ahaan loo muujiyo natiijada, iyo in kasta oo AMD ay qabatay shaqo aad u wanaagsan soo bandhigidda tikniyoolajiyadan, waa inaan sugnaa illaa iyo inta wax walba la waafaqayaan. Laakiin markasta oo ay Ciyaaruhu “culus yihiin”, hadana kuma sii habboonaan karaan 650Mb DVD. Iyada oo leh 4K waxaan ka hadlaynaa ciyaaraha ka badan 100Gb, sidaa darteed in kasta oo ay u muuqato in tikniyoolajiyaddu ay sii kordhayso xawaareynta wareejinta, hadana waa wax ciyaaruhu u baahan doonaan iyada oo ay ugu wacan tahay cabirkooda sii kordhaya iyo kordhinta mugga culayska wejig kasta, heer, marxalad. ama wax kasta.
Ka hadalka kacaanka waxay noqon kartaa lacag la’aan. Haddii ay run tahay in go’aanka lagu soo daro SSD ee loogu talagalay gunaanadyada soo socda waa guul, maxaa yeelay ma doonayo inaan ka fekero sida ay noqon laheyd haddii ay sii wadaan isticmaalka HDD farsamo ahaan sida kuwa ay ilaa hadda qalabaysan yihiin. Waxaan xaqiiqdii arki doonaa sida tikniyoolajiyadda noocan ah ee loo yaqaan ” PCIe 4.0 technology ‘loo beddelo, maxaa yeelay hadda waxaan ku jirnaa mooddolo hore, kuwaasoo xitaa ka dambeeyay mid ka mid ah moodooyinka ugu wanaagsan ee teknoolojiyadda hore.
Muujinta jaantuska ee faa’iidada SSD sida diskka adag oo lagu ciyaaro
Oo waa inaan eegnaa suuqa console, halkaas oo jiilka cusub haddii ay tahay wax cusub oo ay ka mid tahay ka mid noqoshada SSDs iyo halka tikniyoolajiyada ‘PCIe 4.0’ ay mas’uul ka noqon doonto sameynta “sixir”. Waqtiyada rarida ayaa noqon doona kuwo gaagaaban oo sida la sheegay hagaajinta marka la xirayo walxaha inta lagu jiro ciyaarta ayaa sidoo kale waa run. Ugu yeeridda kacaanku waxay noqon kartaa hab ka badan oo lagu sameeyo suuqgeynta, xalka u muuqda mid qasab ah. Laakiin maanta, wali ma ogaan karno sida kuwan adag ee xirxiran ee noqon doona Xbox Scarlett iyo Playstation 5, ay uga faa’idaysan doonaan faa’idadan cusub.